ICC'n yakka Waraanaa lafa Falasxiinotaa humnaan weerarame keessatti raawwatame qorachuu jalqabe - NuuralHudaa
Majliisni Oromiyaa Mata Dureewwan garagaraa irrattii Imaamotaa fi Du’aatotaa leenjii kennuu jalqabe
Baankiin Zamzam Magaalaa Finfinneetti Dameewwan lama kan biroo bane
ICC’n yakka Waraanaa lafa Falasxiinotaa humnaan weerarame keessatti raawwatame qorachuu jalqabe
Abbaan alangaa mana murtii yakka Idil Addunyaa (ICC) , yakka waraanaa june 2014 irraa kaasee, loltoonni Israa’el lafa Falasxiinotaa humnaan Weerarame keessatti raawwatan irratti qorannoo jalqabuu beeksise.
Hoggantuun abbaa alangaa ICC, Miss Fatou Bensouda, Waajjirri isii waggaa 5 dura galmee yakka waraanaa, “West Bank, Gazaa fi magaalaa Alquds gama bahaatti raawwatame ilaaluu akka jalqabee fi amma immoo qorannoon ifatti jalqabamuu ibsite.
Murtii ICC kana Mootummaan Isra’eel kuffisee jira, Qondaaltonni Falasxiin immoo gammachuun kan simatan yoo ta’u, Mootummaan Ameerikaa gama isaatiin qorannoon kun jalqabamuu balaleeffachuu gabaafame.
Ministeerri haajaa alaa Amerikaa Antoonii Biliinken, Isra’eel miseensa mana murtii yakka Idil addunyaa waan hin ta’iiniif, Manni murtiichaa qoratuuf aangoo hin qabu jedhe.
Manni murtii Idil Addunyaa waliigaltee Room irratti hunda’uun yakka waraanaa, Duguggaa sanyii fi ajjeechaa jumlaan raawwatame irratti himannaa banuuf aangoo qaba, Isra’eel immoo waliigaltee Room kana hin mirkaanneessine, tahuus Barreessaan Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii bara 2015tti Falasxinoonni waliigaltee kana fudhachuu ibsuun, Manni murtii Idil Addunyaa aangoo himannaa banuu akka qabu murteesse.
July 31, 2021 sa;aa 6:03 pm Update tahe
Dhiifamni nagayaa fi tasgabbii nama gonfachiisa
Haadhaa ofii dallansiisuun balaa guddaaf nama saaxila.
Karaa Rabbii irratti nama yaamuun salphaa tahuu dhabuu mala!
Guutuu Addunyaatti Talaalliin COVID-19 Dooziin Biliyoona 3 ol keennamuu gabaafame